Shiinaha warshad kolajiin bovine iyo alaableyda | Gelken
Kolajiin bovine waxaa laga sameeyaa maqaarka lo'da cusub, oo lagu farsameeyo nadiifinta heerkulka sare, laguna daro teknoolojiyad soo saarid casri ah si looga sooco borotiinnada tayo sare leh maqaarka. Ka dib markii la qurxiyo, deodorization, fiirsashada, qallajinta iyo burburin, sheyga leh maadada peptide sare ayaa la sameeyaa.
Kolajiin bovine waa borotiin dabiici ah oo kujira unugyada isku xira, lafaha, carjawda, iyo haraga lo'da. Caadi ahaan isku-darka kolajka ee aad ku arkeyso dukaamada waxaa laga soo qaatay haragga. Waxaa jira dhowr nooc oo kolajiin ah, oo mid kastaa ka kooban yahay amino acids kala duwan. Kolajka 'lo'da' lo'da waxay dhacdaa inay la mid tahay collagen-ka aan ku hayno jirkeena.
Yaraynta kolajka waxay ku dhacdaa si dabiici ah da'da, taas oo dhiirrigelisa muuqaalka laalaabka, qalajinta maqaarka iyo baabi'inta dhalaalkaas, dhalaalka dhalaalaya ee aad mar uun u qaadatay. Dhinaca wanaagsan, kaabayaasha nafaqada ayaa laga yaabaa inay gacan ka geysato maareynta geeddi-socodka gabowga. * Hal daraasad, 15% haweenka qaatay kaabis ay ku jiraan nooca I kolajiin biyo kuleyl leh (nooc ka mid ah kolajiin bovine), ayaa lahaa khadadka wajiga iyo laalaabkii oo yaraaday 60 maalmood kadib, 32% haweenku waxay lahaayeen heer gabow (sawir maqaarka oo sababa qorraxda oo sii dheeraata), iyo 39% ayaa taageeray qoyaanka maqaarka. dabacsanaanta maqaarka afar toddobaad kadib.
Collagen waa qayb muhiim ah oo ka mid ah jirka aadanaha. Waxay isku haysaa jirka waxayna taageertaa qaab dhismeedka jirka oo dhan. Kordhinta habboon ee peptides-ka biogen ee bioactive da 'yar, sidakolajiin bovine laga bilaabo Gelken, si loo ilaaliyo qaab nololeed caafimaad leh ayaa ah bar bilow wanaagsan oo lagula dagaallamayo gabowga iyo joogtaynta shaqaynta jidhka.